Wararka - Dhalada dhalada ah ee dib loo isticmaali karo
Dhalada Muraayadda ah
Dhalada saliida saytuunka
Taangiga Kaydinta Dhirta ee Sayniska Sare
Weel la qaadan karo
Weelka miiska yar
Weelka dharka yurubiyanka
Wareejiye cadar wareegsan
Dhalada dib loo isticmaali karo
Waxa dalkayga ka jiray dhalooyin quraarado ah ilaa wakhtiyadii hore. Waagii hore, wareegyada tacliinta waxay rumeysnaayeen in quraaraduhu ay aad u yaryihiin waqtiyadii hore, sidaas darteed waa inay lahaadaan oo ay isticmaalaan dhowr fasallo xukun. Si kastaba ha noqotee, daraasadihii ugu dambeeyay waxay rumeysan yihiin in dhalooyinka qadiimiga ah aysan dhib ahayn soo saarid iyo soo saarid, laakiin ma sahlana in la ilaaliyo, sidaa darteed waa ku yar tahay jiilalka dambe. Dhalada quraaradu waa weel wax lagu cabbo oo sharaab dhaqameed ah oo wadankayga ku yaal, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu xidho oo leh taariikh dheer. Iyada oo agabyo badan oo baakado ahi ku soo qulqulayaan suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa weli ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakaddeeda ee aaladaha kale ee wax lagu rido aanay beddeli karin.
Isticmaalka muraayadda si loo sameeyo weelasha wax lagu duubo waxay leedahay taariikh dheer, soosaarka warshadaha waaweyn ee dhalooyinka iyo gasacadaha ayaa ahaa arrin ku dhow boqol sano. Maaddaama weelasha wax lagu duubo, dhalooyinka quraaradaha iyo gasacadaha ay leeyihiin faa'iidooyin badan, sida alaabada ceeriin ee badan, qiimaha hooseeya, hufnaanta sare, iyo xasilloonida kiimikada wanaagsan. Waa la neefsan karaa, ma beddelo midabka, waa la furi karaa waana la xidhi karaa marar badan, waana la isticmaali karaa dibna loo isticmaali karaa; in kasta oo ay jilicsan tahay oo culus tahay, dhalooyinka dhalooyinka iyo gasacadaha ayaa had iyo jeer ahaa weel wax lagu rido oo muhiim ah. Isticmaalka ballaaran ee dhalooyinka iyo gasacadaha ayaa si tartiib tartiib ah uga dhigtay dib-u-warshadaynteeda iyo dib-u-isticmaalkeeda mid aad u muhiim ah. Guud ahaan marka laga hadlayo, dib-u-warshadaynta iyo dib-u-isticmaalidda dhalooyinka iyo gasacadaha dhalada ah ayaa ka fudud marka loo eego baakadaha lagu xidho alaabooyinka kale, oo waxay u baahan yihiin oo keliya in la nadiifiyo ka hor inta aan dib loo isticmaalin. Warshadaha muraayadaha waxay u isticmaalaan muraayadda qashinka dib loo warshadeeyay inay yihiin alaab ceyriin, taas oo leh faa'iidooyin muhiim ah oo deegaanka ah. Tamarta waa la yareyn karaa. Isticmaal 4% ilaa 32%, yaree wasakheynta hawada 20%, yaree qashinka macdanta 50%, una yaree isticmaalka biyaha 50%. Laga bilaabo ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka, wadamada adduunka waxay u ololeeyaan dib u warshadaynta dhalooyinka iyo gasacadaha.
Qiyaasta dib-u-warshadaynta ee dhalooyinka quraaradaha ahi way sii kordhayaan sannad kasta, laakiin tirada dib-u-warshadayntu waa mid weyn oo aan la qiyaasi karin. Sida laga soo xigtay Ururka Baakadaha Dhalada: Tamarta ku keydsan dib u warshadaynta dhalada dhalada ah waxay ka dhigi kartaa nalka 100-watt nalka ilaa 4 saacadood, wuxuu socodsiin karaa kombuyuutar 30 daqiiqo, wuxuuna daawan karaa 20 daqiiqo barnaamijyada TV-ga. Sidaa darteed, muraayadaha dib-u-warshadaynta waa arrin muhiimad weyn leh. Dib-u-warshadaynta dhalada muraayadaha ahi waxay keydineysaa tamarta waxayna yareynaysaa awoodda qashinka qashin-qubka, taas oo ku siin karta alaab ceeriin badan alaabooyinka kale, oo ay ku jiraan dhalooyinka dhalada dabcan. Sida laga soo xigtay Warbixinta Dhalada Qaranka ee Macaamiisha Caaga ah ee Golaha Wax soo saarka Kiimikada ee Mareykanka, qiyaastii 2.5 bilyan oo rodol oo dhalooyin caag ah ayaa dib loo warshadeeyay sanadkii 2009, iyadoo heerka dib u warshadaynta uu yahay kaliya 28%. Dib-u-warshadaynta dhalooyinka quraaradaha ahi waa wax fudud oo faa'iido leh, iyada oo la jaan-qaadaya istiraatiijiyado horumarineed oo waara, waxay badbaadin kartaa tamarta waxayna ilaalin kartaa kheyraadka dabiiciga ah.
Waqtiga boostada: Aug-27-2020
Xuzhou Honghui waxyaabaha muraayadaha Co., Ltd. waxay ku soo dhaweyneysaa macaamiisha adduunka oo dhan, waxaan rajeyneynaa inaan noqdo lammaanahaaga lagu kalsoon yahay!
Junsheng Plaza 3-1202, Degmada Gulou, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha
Wax Weydiin Bilaash ah
Ma ogtahay? Waxaa jira noocyo badan oo glas ah ...
Ma taqaanaa sida loo sameeyo dhalooyinka quraaradaha ah ...